Cheta na onye obula nwere oru imere onwe ha ihe oma, o ghaghi inwe obi ilu ma obu iwe iwe ma o buru na mmadu ekwenyeghi gi na onu ahia ma obu ihe ozo. Nke a apụtaghị na ha agaghị enweta mmụọ mana ị gaghị enwe ike. N’ezie, ekwesighi igosipụta ihe ị na-eche ma ọ bụ mmetụta gị na mkparita ụka - mee ka ha chee echiche.
I kwesịkwara inwe mmetụta ma ọ bụ nchegbu banyere otu ị si emeghe ọkwa gị ma ọ bụ kwuo ihe ị chọrọ, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị ka ị ghara inwe nchekasị n'ihi na ị ga-eme ihe ọjọọ. N'ọnọdụ ebe ị na-echegbu onwe gị ma ọ bụ na-echegbu onwe gị tupu ma ọ bụ n'oge mkparịta ụka, ị kwesịrị ịkwụsị maka ezumike (jiri ihe ngọpụ nke ịga ụlọ mposi dịka ọmụmaatụ) ma dee onwe gị ma ọ bụ mee ka onye ọzọ weghara (Ị nwere ihe mberede mee ihe).
Kwesịrị inwe ụkpụrụ nduzi gị maka ihe dị mma maka gị, ọ nweghị onye ọzọ, naanị maka gị. I meela nchọpụta gị, ị makwaara ihe ị chọrọ. Nke a abụghị okwu nke “iwere mickey” ma ọ bụ ịhụ ihe ị ga - agbanahụ - ikwenye n'eziokwu na ọnọdụ gị, ha ga - enye gị ihe ịchọrọ ma ọ bụ na ị ga - ahapụ. Ga-enwe ngwaahịa zuru oke maka na ịchọghị nke a nke ọma.
Y’oburu n’inwe mmekorita a n’ekwesiri ime ugwo kari nke dikoro gi nma, ya bu na nkenke abanyela na mkparita uka nke ichoro ma oburu na i ghaghi itinye ezi ihe nke izochiri anya ihe ozo. ịgwa onye ị tụkwasịrị obi na ngwa ahịa ịchọrọ ma ziga ha na enweghị ikike ịgbanwe usoro okwu gị.
Agbanyeghi na otutu mkparita uka bu banyere nkwekorita nke ahia rue mgbe unu abuo nwere nkwekorita nke unu g’ebidide, ikwesiri do onwe gi oke karie nke willgaghi aga n’ihi na “odighi mgbe obu ihe kwesiri.
Ekwekwala ka ihe ọ bụla mee ka ị tụọ ụjọ, ndị mmadụ na-anwa ime ka ihe niile yie ka ọ kwesịrị idozi ya site n'ide ihe tupu oge ma ọ bụ igosipụta ihe dị ka onye isi, rapara na nyocha nke gị iji kpebie ma ọ bụrụ maka gị ọ bụghị ka a ga-agbanwe ya.
I kwesiri izogide ego ha ma choo ka ha nye gi ohere obula ma oburu na ha asighi, ndi mmadu kwesiri iche na ha arusiwo oru ha, ma oburu na ha bia ngwa ngwa, ha ga amalite inwe obi abua na ha mere ezigbo ihe.
Chegodi ọ bụrụ na ị wepụpụ aka ha n'ọnụ ọnụ mbụ ha kpọtụrụ aha, obi ga-atọ ha ụtọ na mbụ mana ha ji nwayọ jụọ onwe ha, “ọ nwere ihe funahụrụ m”, “a sị na m nwetakwu ego” sochiri “Ee, enwere m ike inwetakwu Ego! ”Mgbe ahụ ha ga-ekwenye na ha emejọwo ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ha nwere ike mechaa kwụsị ya - ikekwe ha ga-akwụsị ya. Ya mere mee ha ka ha rụọ ọrụ maka nkwekọrịta ahụ, ị ​​ga na-emere ha amara.
Will ga-eji uru dị n’ọrụ gị niile rite uru na ya - ọ ga-eme akụkụ nke ọzọ, yabụ mee ha amara!